Larkin akakurudzira vazhinji kuti vaite fungidziro isiriiyo yekuti Nguva yeKutambudzika kukuru ichave makore manomwe
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Larkin akakurudzira vazhinji kuti vaite fungidziro isiriiyo yekuti Nguva yeKutambudzika kukuru ichave makore manomwe
Larkin akakurudzira vazhinji kuti vaite fungidziro isiriiyo yekuti Nguva yeKutambudzika kukuru ichave makore manomwe
Clarence Larkin, anoonekwa ari munhu wepamusoro-soro pakudzidza Bhaibheri uye kutaura kwake kunobatwa nekushandiswa nevaparidzi vazhinji, akatidzidzisa zvizhinji pamusoro peBhaibheri asi haana kukwanisa kuronda zvimwe zvinhu pazviporofita zvemaBhuku Zvakazarurwa naDanieri. Kudzidza kwake kwepamusoro kwakabatsira kusimbisa kupararira kwepfungwa yemakore manomwe enguva yeKutambudzika, anova ariko, zvisinei, hakuna Magwaro anozvitsigira. Akakanganisa kutsanangura mavhesi maviri eMagwaro anowanikwa muchiporofita chemavhiki makumi manomwe aDanieri. Hatipomere dhokotera Larkin, nekuti mavhesi maviri aya akanyorwa nenzira inoita kuti zvive nyore kwazvo kwavari, nemamwe maKristu, kuti vakanganise kumaturikira uye kuti vapedzisire vakanganisa.
Chiporofita chimwe chezvinhu zvinoita kuti zvive nyore kwatiri maKristu kuti tizive zviri kuitika.
Ngatitangei kutarisa zvinhu zvitatu zvakakosha zvinotaurwa muchiporofita chemavhiki makumi manomwe aDanieri.
Tinofanira kujekesa kuti gore remuBhaibheri rinomirirei kana kuti gore rechiporofita.
3 Ndicharaira zvapupu zvangu zviviri kuti zviprofite, zvakapfeka masaga, mazuva ane chiuru chinamazana maviri namakumi matanhatu.
One score = 20 (makumi maviri)
Saka mwedzi 42 yemuBhaibheri = mazuva 1260
Mwedzi 1 wemuBhaibheri = 1260/ 42 =mazuva 30
Gore 1 remuBhaibheri = mwedzi 12 = 12 x 30 = mazuva 360
Gore redu = rine mazuva 365,24 saka gore redu rine mazuva 5,24 akawanda kukunda mazuva eBhaibheri.
Pamakore edu 69 kune mazuva akawandisa 69 x 5,24 = mazuva 362
Saka makore edu akawanda negore 1 pamakore emuBhaibheri (mazuva maviri anowandisa apa haana zvaanokanganisa pakuverenga).
Saka makore edu 69 = makore 70 emuBhaibheri
2. Chii chingamiririrwa “nevhiki” muchiporofita?
Rabani paakataura naJacobo:
GENESISI 29:27 Pedzisa vhiki yewaniso naiyeyi, tigokupa mumwe vo pamusoro pebasa rauchandibatira mamwe makore manomwe zve.
Kutora zuva rimwe kumiririra gore, vhiki iri rinomiririra nguva yemakore manomwe.
Mwari akashandisa nzira iyi pakutaura nguva mune zvimwe zviitiko zviviri.
NUMERI 14:34 Samazuva amakanga muchishora nyika nawo, iwo mazuva anamakumi mana, saizvozvo muchava nemhosva yokutadza kwenyu zuva rimwe nerimwe richaita gore rimwe, ndiwo makore anamakumi mana, mugoziva kuti ndakakufuratirai.
EZEKIERI 4:6 Zvino kana wapedza mazuva awa, uvate pasi norutivi rwako rworudyi, kuti utakure zvakaipa zveimba yaJuda, ndakakutarira mazuva anamakumi mana, zuva rimwe nerimwe rifananidze gore.
Saka muchiporofita, vhiki rinokwanisa kumiririra makore manomwe.
3. Saka ngatigadzirisei miganhu yenguva kubva pakutanga kusvika pakupedzisira kwemavhiki makumi manomwe echiprofita chaDanieri.
DANIERI 9:24 Vhiki dzinamakumi manomwe dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi, nokuyananisira zvakaipa, nokuvuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa novuprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene.
Mavhiki 70 = 70 x 7 = makore 490 anopiwa kumaJuda
25 Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurairo wokuvandudza nokuvaka, Jerusarema kusvikira kune wakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe, vuye vhiki dzinamakumi matanhatu nembiri dzichavako dzokuvakwa kwaro, rine nzvimbo mhamhi, nemigero, asi zvichaitwa neguva yokutambudzika.
7 + 62 = mavhiki 69 x 7 = makore emuBhaibheri 483= 483 – 7 = makore edu 476
Pamakore 70 emuBhaibheri ega ega, tiri kumashure negore rimwechete remakore edu.
Nehemia akapiwa mvumo namambo kuti avake zve masvingo.
Wikipedia Artaxerxes I ... aive mambo wavaPersia wechishanu kubva muna 465 BC kusvika muna 424 BC.
NEHEMIA 2:1 Zvino nomwedzi weNisani, negore ramakumi maviri ramambo Artashasta, panguva yaakanga aine waini pamberi pake, ini ndikatora waini, ndikaipa mambo. Zvino ndakanga ndisina-kumbopunyaira pamberi pake.
Kutora 465 BC segore rekutanga kwake kutonga, na 464 BC segore rake rechipiri achitonga
465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 BC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 gorerechi 20
Saka gore rake rechimakumi maviri rinoita 446 BC.
Saka chiprofita ichi chakatanga muna 446 BC.
NEHEMIA 2:7 Vuye ndakati vo kuna mambo: Kana mambo achifara nazvo ndinokumbira kuti ndinopiwe nwadhi dzakanyorerwa vabati vari mhiri kworwizi, vanditendere kupfuvura ndisvike kwaJuda.
8 Neimwe nwadhi vo kunaAsafi mutariri wedondo ramambo, andipe miti yokuita nayo matanda amasuvo enhare yapaimba yaMwari nookuisa parusvingo rweguta, napaimba yandichapinda. Mambo akandipa izvozvo, nokuti ruvoko rwakanaka rwaMwari wangu rwakanga ruri pamusoro wangu.
Nehemia akavaka patsva rusvingo namasuvo eguta reJerusarema. Masuvo ndipo panosangana nzira nerusvingo. Aivaka nezvombo zvake zviri mune rumwe ruvoko nekuda kwekutyisidzirwa kusingaperi kwaaiitwa nevavengi vemaJuda.
NEHEMIA 2:13 Ndikabuda novusiku napasuvo romupata, ndikaenda nokutsime reShato, nesuvo ramarara ndikacherechedza masvingo eJerusarema akanga akoromoka, namasuvo aro akanga atsva nomoto.
NEHEMIA 4:6 Naizvozvo takavaka rusvingo; rusvingo rwose rukabatanidzwa kusvikira pahafu yokukwira kwaro, nokuti vanhu vakanga vachida kubata.
NEHEMIA 4:17 Vaivaka rusvingo navaitakura mitoro, vaitutira; mumwe nomumwe wakabata noruvoko rwake rumwe pabasa asi norumwe wakanga akabata nhumbi yake yokurwa nayo.
Saka 62 + 7 = mavhiki 69 aive adarika pakasvika Jesu ari Messiah.
DANIERI 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurairo wokuvandudza nokuvaka, Jerusarema kusvikira kune wakazodzwa, iye muchinda (Messiah), zvichaita vhiki nomwe, vuye vhiki dzinamakumi matanhatu nembiri dzichavako dzokuvakwa kwaro, rine nzvimbo mhamhi, nemigero, asi zvichaitwa neguva yokutambudzika.
Jesu akauya rini saMessiah Muchinda?
Augustus aive mumwe wemadzimambo aive nembiri kwazvo eRoma akatonga kwemakore makumi mana, saka mazuva ake akanyorwa zvakanakisa.
Mambo Augustus akafa muna 14 AD.
Seneta akaita mwanakomana wake wekuwana Tiberius mambo muna AD 14.
Panguva iyoyo, seneta weRoma ega ndiye aikwanisa kugadza munhu samambo.
Augustus akaita Tiberius mubatsiri wamambo muna 12 AD kana kuti 13 AD (zvichienderana nekuti magwaro enhoroondo amunoda kushandisa ndeapo) asi sarudzo iyi yaive isina kupasiswa naseneta. Pakafa Augustus, Tiberius akakumbira seneta kuti amutambire samambo, zvakabva zvaitwawo.
Ruka anoti Johane Mubhabhatidzi akatanga kuparidza mugore rechigumi nemashanu rekutonga kwaTiberius.
RUKA 3:1 Negore regumi namashanu rekubata kwaTiberio Kesari, ...
2 ... Shoko raMwari rakauya kuna Johane mwanakomana waZakaria, murenje.
Saka zvinodaro raive gore 29 AD. (14 + 15 = 29)
Hushumiri hwaJohane hwakaita mwedzi inoda kuita mitanhatu, saka inogona kuva imwe nguva mumashure ma 29 ½ Johane paakabhapatidza Jesu. Ruka anoti Jesu aive nemakore anenge 30. Saka mazuva aya anoenderana.
RUKA 3:21 Vanhu vose vakati vabhapatidzwa naiye Jesu akabhapatidzwa vo, achinyengetera denga rikazarurwa,
22 Mweya Mutsvene akaburuka pamusoro pake, nomufananidzo wakaita sowenjiva, inzwi rikabva kudenga, richiti: Ndiwe Mwanakomana wangu unodikanwa; ndinokufarira.
23 Zvino iye Jesu wakanga unamakore anenge makumi matatu, ...
Saka Johane Mubhapatidzi akazivisa Messiah muna AD 30 paakabhapatidza Jesu.
Jesu seGwaiana rechibairo, aifanira kusukwa zvichibva pamurairo waMosesi.
II MAKORONIKE 4:6 Akaita vo midziyo yokusukira inegumi, akaisa mishanu kurudyi, nemishanu kuruboshwe, yokusukira’mo; zvinhu zvezvipiriso, zvaipiswa, zvaisukirwa’mo; asi dziva rakanga riri ravaprista rokushambidzira’mo.
Nguva yakadarika yaive 446 + 30 = 476 emakore edu.
Izvi zvaive 476 + 7 = 483 emakore mapfupi emuBhaibheri. Izvi zvinoita mavhiki 69 akakwana.
(69 x 7 = 483)
Messiah zvinoreva kuti Wakazodzwa.
Mweya Mutsvene wakauya ukazorora pamusoro pake kuti umuzodze pakazara vanhu.
Tichiwedzera, murairo waMosesi waida kuti muprista mukuru (panguva iyoyo aive Aroni) aifanira kutanga ashambidzwa nemuprofita Mosesi zvino muprista mukuru aizozodzwa.
EKSODO 29:4 Zvino uvuye naAroni navanakomana vake kumukova wetente rokusongana, ugovashambidza nemvura.
Saka Jesu, seMuprista wedu Mukuru, aitanga ashambidzwa nemuporofita Johane Mubhapatidzi, ndicho chikonzero nei Johane akamubhapatidza.
EKSODO 29:7 Zvino unofanira kutora mafuta echizoro, uadire pamusoro wake umuzodze. (Aroni)
Apedza kushambidzwa Jesu aifanira kuzodzwa.
Johane haana kuudzwa naMwari kuti aite izvi.
Saka mumashure mekubhapatidza Jesu akamira akatarisa, zvichibva paMurairo waMosesi, Mweya Mutsvene wakaburuka kubva kudenga senjiva kuzozorora pana Jesu ukamuzodza pamberi peruzhinji.
Nenzira imwechete yaizorora mafuta echizodzo pamuprista mukuru, Aroni.
Inzwi rakati, “Mwanakomana wangu wandinodisa”. SeMwanakomana waMambo, kukosha kwaive pana Jesu seMuchinda.
“Kuna Messiah Muchinda”. Wakazodzwa, Jusu, ndiye aive Mwanakomana weMweya Mutsvene.
MATEO 1:18 Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaive kudai: Maria mai vake, wakati anyengwa naJosefa vasati vasongana, wakavonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
Saka Mweya Mutsvene ndiwo Baba veMunhu Jesu.
Saka mavhiki 69 akapera muna AD 30 Jesu paakatanga hushumiri hwake.
Clarence Larkin anoti zuva regore AD 30 rinomiririra musi weSvondo yeMuchindwe, asi pazuva iroro Jesu akapinda muJerusarema ari pambongoro saMambo wemaJuda, kwete seMuchinda wavo.
ZEKARIA 9:9 Fara kwazvo iwe mukunda weZioni; pururudza iwe mukunda weJerusarema; tarira, Mambo wako anouya kwauri; ndiye wakarurama, ndiye unokunda; unozvininipisa, akatasva mbongoro, iyo mhuru mwana webhongoro.
Svondo yeMuchindwe yakaitika kwapera makore 3 ½ pakupera kwehushumiri hwaJesu.
JOHANE 19:19 Pirato akanyorawo rugwaro, akaruisa pamuchinjikwa; kwakanga kwakanyorwa, kuchinzi: JESU WENAZARETA MAMBO WEVAJUDA.
Saka paCalvari, kukosha pana Jesu kwaive kwakaiswa pachinzvimbo chaiti Ndiye Mambo wevaJuda.
Saka apa paive pava pakati pevhiki raDanieri rechimakumi manomwe.
Jesu akaroverwa Mwari achibva abvarura chidzitiro cheTembere.
Kubva ipapo zvichienda mberi kunamata kwemuTemberi kwakabva kwapera mumaziso aMwari.
Chibairo chaive chakakosha kuzvivi chaive chakaturikwa pamuchinjikwa, asi ichi ndicho chibairo chaive charambwa nevaJuda.
Saka kubva ipapo zvichienda mberi Mwari akamba zvibairo zvemaJuda zvavaiuya nazvo kuTembere.
Kubaira mhuka kwemaJuda kwese kwaive kusisina zvakwaireva .
Kunamata muTembere kwemaJuda kwakabva kwapera basa. Kusisina zvakunoreva.
Mitambo yavo yese yakanga yangove kupira kusina zvakunoreva, kusisina chirevo pamweya uye kusisakwanisi kuripira zvivi.
51 Ipapo, tarira, chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi.
Majuda akaramba Mwari paCalvari nekuuraya Messia wavo.
Saka Mwari akabva aramba kunamata muTembere kwemaJuda akatanga kushanda nemaHedeni.
DANIERI 9:27 Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe: pakati pevhiki uchagumisa chibairo nechipo,
Kufa kwaJesu, mumashure mehushumiri hwemakore matatu nehafu, (nekuti aifanira kufa pakati pevhiki rechimakumi manomwe) kwakagumisa zvibairo zvemaJuda nekuti ndiye aive Chibairo chikuru.
Saka Mwari akashanda nemaJuda kwemavhiki 69 nehafu, asi parizvino yaive iri nguva iyo maJuda akaramba Messia wavo nekukumbira rufu rwake.
Saka Mwari akamanikidzwa kuti afuratire maJuda nekuti vaive vamuramba.
Mwari akafuratira maJuda, mumashure mekunge ivo vaive vatanga kumufuratira.
Pakafa Jesu muna 33 AD saMambo akarambwa, Mwari akabva atendeukira kumaHedeni.
Akarambwa nemaJuda, Mwari akabva atanga kudaidza kereke yaizova yakazara maHedeni nekufamba kwaizoita nguva.
Asi Mwari anorangarira kuti anokwereta maJuda makore matatu nehafu.
Hafu yevhiki iyi inofanira kuzadziswa imwe nguva munguva inouya, pakuchave neshanduko huru mukuita kwemaJuda vachitevera Mwari shanduko iyi ichaunzwa nenguva yeKutambudzika kukuru.
Chinangwa chimwechete chenguva yeKutambudzika kukuru ndechekumanikidza maJuda kuti vadzokere vagamuchire Jesu, sezvo achave iye ega anokwanisa kuvaponesa munguva dzakaoma dzine kufa kunorwadza, kuparadzwa nekuungudza.
Saka nguva yeKutambudzika kukuru yemakore matatu nehafu ichauya munguva inouya ndiyo nguvawo imwechete yakapiwa muchinda waAntikristu, mwanakomana wekuparadza.
Achange akazodzwa nemweya waSatani, sezvazvaive kuti Jesu aive akazodzwa naMwari Baba.
Jesu, saMessia Muchinda ane hushumiri hwemakore matatu nehafu paanounza Hupenyu.
Muchinda waAntikristu, anoda kutevedzera Jesu, ane hushumiri hwemakore matatu nehafu zvakare. Iyi ichave nguva yeKutambudzika kukuru paachange achiunza rufu.
Kushanda nemakore emuBhaibheri.
Pakarenda redu pamuchinjikwa
446 BC 33AD
Tinotarisa mavhesi maviri emuMagwaro akaita kuti vanhu vasvike pamakore manomwe enguva yeKutambudzika.
Kukanganisa kwaLarkin kukuru kwaive kutora mavhesi maviri ekuna Danieri aya ari ega asingashandisi mamwe Magwaro kuti awane chokwadi chinorehwa nemavhesi maviri aya.
Mavhesi maviri acho ndeaya:
DANIERI 9:26 Zvino kana vhiki idzo dzinamakumi matanhatu nembiri dzapera, Wakazodzwa uchabviswa, akasara asinechinhu, vanhu vomuchinda unozovuya, vachaparadza guta nenzvimbo tsvene; asi kuguma kwazvo kuchavuya nokukukurwa, kurwa kuchavapo kusvikira pakuguma; kuparadzwa kwakatemwa.
27 Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe; pakati pevhiki uchagumisa chibairo nechipoo.
“Muchinda unozovuya” zvinoreva antikristu Pope weRoman Catholic achatonga munguva yeKutambudzika.
Anomiririrawo zvenguva yakadarika, kunemukuru wemauto weRoma Tito akaparadza Jerusarema muna AD 70.
Ipapo baba vake Vespasian vaive vaitwa mambo weRoma.
Semwanakomana wamambo, Tito aive akafanira kudaidzwa kuti muchinda.
Vanhu vake vaive vaRoma vechipegani vakaparadza Jerusarema nenzira inehutsinye zvakanyanya zvisina kubvira zvamboitwa nehushe hweRoma pane chero rimwe guta.
Vanhu vanodarika miriyoni vemaJuda vakafa.
Vanhu vaPope waAntikristu, achauya, vachava maRoma echipope ekereke yeRoman Catholic. Pope wekupedzisira achashandisa simba remauto nevushe hwevadzvanyiriri gumi.
ZVAKAZARURWA 17:12 Nyanga dzinegumi dzawavona ndiwo madzimambo anegumi, achigere kupiwa vushe, asi vachapiwa simba samadzimambo pamwechete nechikara nguva imwe.
13 Ivo vanendangariro imwe, vanopa chikara simba ravo, novushe bwavo.
Kukanganisa kukuru kunoitwa nemaKristu pachiporofita ichi ndekupi?
Larkin nevamwe vaparidzi vazhinji, vanoshandisa mavhesi maviri ekunaDanieri pamwechete. Izvi ndizvo zvavanotaura:
DANIERI 9:26 “... vanhu (maRoma) vomuchinda unozovuya (antikristu wenguva inouya) vachaparadza guta nenzvimbo tsvene; asi kuguma kwazvo kuchavuya mukukukurwa, nokurwa kuchavapo kusvikira pakuguma; kuparadzwa kwakatemwa...
27 Zvino Iye (antikristu anovuya- kuturikira kusiriiko) uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki rimwe: pakati pevhiki uchagumisa chibairo nechipo”,
Izvi zvinoita sekuturikira kwakarasika kubva pakutanga. Asi regai tione tsananguro yazviri kuzotipa.
Rangarirai, vhiki rine mazuva manomwe saka izvi zvinogona kumiririra makore manomwe.
Larkin anoti AD 30 ndipo pakafa Jesu.
Saka kunosara nguva inokwana makore manomwe inozoita nguva yeKutambudzika kukuru.
Ngatitarisei nguva yeKutambudzika yemakore manomwe inotaurwa naLarkin:
Kutaura uku (kusiri chokwadi) kunotipa makore manomwe enguva yeKutambudzika antikristu achitonga.
Nguva yeKutambudzika inotanga naantikristu achiita kana kuti achinyorerana pasi sungano nemaJuda kwemakore manomwe (vanhu vazhinji vanofunga kuti ichi chibvumirano cherunyararo). Anobva aputsa sungano iyi ava pakati nepakati pevhiki renguva yeKutambudzika kukuru, mumashure memakore matatu nehafu.
Kutaura uku kunoita kuti zvinhu zvimire zvisina kunaka pakupedzisira nekushaikwa kweMagwaro anotsigira.
Saka tinofanira kuva nenguva ‘yekutambudzika yakareruka” (hameno kuti zvinorevei) makore matatu nehafu ekutanga (ingori fungidziro isina humbowo). Ichiteverwa nemakore matatu nehafu “akaipa” enguva yekutambudzika pamakore matatu nehafu ekupedzisira (ane magwaro anomatsigira).
ZVAKAZARURWA 13:5 Ipapo chakapiwa muromo wekutaura mashoko makuru, nezvokumhura; chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi inamakumi mana nemiviri.
Mwedzi 42 = mazuva 1 260
ZVAKAZARURWA 12:6 Mukadzi (Kereke yemaJuda) akatizira kurenje, paakagadzirirwa nzvimbo naMwari, kuti vamuchengete’po mazuva anechiuru chinamazana maviri namakumi matanhatu.
ZVAKAZARURWA 12:13 Shato yakati yavona kuti yakandirwa pasi panyika, ikatambudza mukadzi (kereke yemaJuda) wakazvara mwana womukomana.
14 Ipapo mukadzi wakapiwa mapapiro maviri egondo guru, kuti abhururukire kurenje kunzvimbo yake, kwaanochengeterwa nguva (gore rimwechete) nedzimwe nguva (makore maviri) nehafu yenguva, (hafu yegore) kwaasingavonekwe nenyoka.
Makore 31/2 = mwedzi 42 =mazuva 1 260
Saka ariko Magwaro ehafu yechipiri “yakaipa” yenguva yekutambudzika inotora makore matatu nehafu, asi hakuna Magwaro anotaura nezvehafu “yakareruka” yenguva yeKutambudzika.
Saka tsananguro iyi ipfungwa yakaenzana sezvo kusina Magwaro anotsigira nguva “yakareruka” yeKutambudzika.
Kuva kunze kweMagwaro hakuna kuchenjera uye hatikukurudziri.
Pano tine kurasika kukuru padzidziso iyi.
DANIERI 9:27 Zvino iye (antikristu anouya) uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe.
Tarirai, haatangi sungano, anozadzisa sungano.
Saka sungano iyi yaifanira kuitwa makore manomwe ekupedzisira asati atanga.
Hakuna Magwaro anotsigira tsananguro iyi.
Hakuna anoziva kuti antikristu achava panyika kwenguva yakareba sei makore manomwe enguva yeKutambudzika asati atanga, kuti aite sungano yaanozozadzisa kwemakore manomwe.
Kuedza kupindura mubvunzo uyu dzinenge dzingori fungidziro, saka parizvini makore manomwe enguva yeKutambudzika anobva ashaiwa kukosha.
Saka regai titurikire Magwaro zvakanaka.
Tinotarisa rimwe Gwaro rinotaura pamusoro “pekuzadzisa sungano”, pachinzimbo chekungoita fungidziro dzekuti ndiantikristu anoita izvi nekuti vhesi radarika rinotaura nezvaantikristu.
Kutaura kuviri muBhaibheri kunoteverana hakuwanzorevi kuti zviri kutaura pamusoro pechinhu chimwechete.
Tarirai vhesi riri kutevera iri:
ISAYA 61:2 Kuti ndiparidze gore rengoni dzaJEHOVA, nezuva rokutsiva raMwari wedu; kuti ndinyaradze vose vanochema.
Jesu akazadzisa hafu yekutanga yehushumiri hwake paaiverenga kubva kuBhuku raIsaya.
20 Akapeta bhuku, akaidzosera kumutariri, akagara pasi;
Zuva rokutsiva (Kutambudzika kukuru) kunouya makore 2 000 mumashure mekuparidza gore rengoni dzaJEHOVA kunyangwe zvinhu izvi zvose zvakataurwa muvhesi rimwechete.
Saka tofanira kuona kuti ndiyani akaita sungano yaakazozadzisa pamberi.
Izvi zvinoreva kuti sungano iyi yakazadziswa nguva yakadarika. Saka hatifaniri kutambisa nguva yedu takamirira pasina kuti igozadziswa nguva inouya.
VAGARATIA 3:17 Zvino ndinoreva chinhu ichi, ndichiti: Sungano yakasimbiswa kare naMwari (munaKristu) haitorerwi simba rayo nomurairo wakazotevera makore mazana mana namakumi matatu apfuvura, kuti chipikirwa chikoneswe.
Zvakakosha kuti tione kuti sungano haina chekuita naantikristu.
Zvakakoshawo kuti tizive kuti sungano yakaitwa kare ikazadziswa.
Mwari akaita sungano naAbrahama pamusoro pemwana wechivimbiso aizoberekwa kuna Abrahama. Iye nevana vake vaizogara nhaka mumusha wechipikirwa weIsraeri.
GENESISI 15:18 Nomusi iwoyo JEHOVA akaita sungano naAbrahama, akati: Vana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweEgipita kusvika kurwizi rukuru , runonzi Yufratesi.
Pakutanga zvaiita sekuti ndiIsaka aive mwanakomana wechivimbiso, mune imwe nzira aive iye, aive mwanakomana wechivimbiso panyama.
Kubva pana Isaka kwakauya maJuda akabuditswa muEgipita naMosesi vachipinda munyika yechipikirwa naJoshua.
Asi vose vana vakabva panaAbrahama (vaive vana vake vekubereka) vaizofa pakupera kwenguva yekurarama yavakatarirwa. Vaizotapwa nevaEgipita, vaAsiria, veBabironi, maPesia, maGiriki vakazopedzisira nemaRoma. Tisingatauri nguva dzavakararama muBhuku reVatongi apo marudzi avaivakidzana navo vaivadzvanyirira nekuvatonga. Roma yaizovaitira mambo anonzi Herode Mukuru aive mambo ane hutsinye kukunda vose vakambotonga vaIsraeri. Hupenyu munyika yechipikirwa hwakava hwakaoma kwazvo. MaJuda akachemera Messiah kuti avasunungure kubva kuvavengi vavo vazhinji. Asi Messia akauya nenzira yakareruka yavaive vasina kutarisira zvekuti vakamuramba vakamuuraya. Vakadzingwa kubva munyika yavo yechipikirwa nemaRoma. Makore anoda kukwana 2 000 akati apera, nekudikitira kukuru, kuomerwa nekudeurwa kweropa, vaizowana chidimbu chenyika yavo yechipikirwa kubva kumaArabu vaive vaigara kwemakore 700. Asi vakarasikirwawo nevanhu mamiriyoni matanhatu mukuuraya kwaHitira kwemakamba egasi vemubatanidzwa wenyika dzepasi rese vasati vavanzwira tsitsi apo pavakazovapa chikamu chenyika yeIsraeri. Vakaitwa nyika yechiJuda muna 1948 vakabva varwiswa nehondo shanu dzemaArabu.Zvisinei, nechishamiso, vakakunda hondo yemuna 1948 uye hondo yemuna 1956 nehondo yemuna 1967 neimwe hondo yemuna 1973. Saka hupenyu hwaive husina kureruka kumaJuda vanova vana vaIsaka vekubereka, mwana waAbrahama vekubereka. Saka sungano yenyama yekuvapa nyika yeIsraeri yakazadziswa. Asi nanhasi vanorwadziwa kubva pakuvengwa kukuru kweParestina. Hupenyu munyika yechipikirwa hauna kubvira hwava mubhedha wemaruva.
Saka ngatitarisei zvakadzama, uye pamweya pasungano yaMwari.
Kristu ndiye aive Mwanakomana wechipikirwa (Mwana) waAbrahama.
Abrahama panyama akaita mwanakomana Isaka. Asi makore anoda kuita 2 000 akazotevera, kutenda kwaAbrahama pakwakasangana nekutenda kwaMaria kwakabereka Mwanakomana wemhandara Jesu, aive Mbeu yechokwadi yaAbrahama.
VAGARATIA 3:16 Zvino izvo zvipikirwa zvakarebwa kunaAbrahama, nokumwana wake. Haarevi achiti: Kuvana vako, savanenge vari vazhinji; asi seanenge ari mumwe unoti: kumwana wako; uyu ndiye Kristu.
Asi kuzadziswa kwesungano yakaitwa naAbrahama kwaizova muna Kristu (ndiye aive Mwanakomana waAbrahama nekuda kwekutenda kwaAbrahama). Kuzadziswa uku kwakaitika apo Kristu akaripira zvivi paCalvari paKuuya kwake kweKutanga. Nechibairo, Kristu anokwanisa kutipa hupenyu husingaperi muhushe hutsva, husina zvivi naSatani. Kristu paanouya kechitatu kuAmagedoni, vachange vari naye ivo vatsvene vevaJuda vakamutswa mumashure mekumuka kwaKristu. Ipapo vachagara nyika yechipikirwa nekusingaperi.
51 Ipapo tarira, chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi; nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka.
52 Mabwiro akazaruka, nemitumbu mizhinji yavatsvene, vakanga vavete, yakamutswa.
53 Vakabuda pamabwiro iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakavonekwa navazhinji.
Vatsvene vemuTestamente yekare vachasangana nemaJuda 144000 vachauraiwa pedyo nenguva yekupera kwenguva yekutambudzika kukuru vozomutswa chinguvana mumashure maizvozvo.
ZVAKAZARURWA 14:1 Zvino ndakatarira ndikaona Gwaiana rimire pagomo reZioni, rinavamwe vanezvuru zvine zananamakumi mana navana, vane zita raro, nezita rababa varo, rakanyorwa pahuma dzavo.
ZVAKAZARURWA 14:4 Ndivo vasina kusvibiswa navakadzi; nokuti vakanaka semhandara. Ndivo vanotevera Gwaiana kwese kwarinoenda. Ndivo vakadzikinurwa pakati pavanhu, kuti vave zvibereko zvokutanga kunaMwari nokuGwaiana.
“Zvibereko zvokutanga” zvinotaura pamusoro pevanotanga kumutswa kuvakafa. 144 000 vanomutswa Mereniyamu isati yatanga semufananodzo werumuko rwese ruchaitika mumashure meMereniyamu .
I VAKORINTE 15:20 Asi zvino Kristu wakamutswa kuvakafa , akava chibereko chikutanga chavavati.
MaJuda aya ndivo vatsvene vachagara nhaka munyika yechipikirwa nekusingaperi sezvo vaine hupenyu husingagumi.
Uku ndiko kuchava kuzadziswa kwekupedzisira kwesungano yakaitwa naMwari kunaAbrahama ikazadziswa munaKristu paakafa pamuchinjiko achifira zvivi zvavo kuti vawane hupenyu husingagumi. MuJuda wega wega ane hupenyu huduku huzere matambudziko munyika yechipikirwa. Totenda Jesu, kana nguva yeKutambudzika kukuru yapera, vachagara nyika yechipikirwa nekusingaperi. Iyi ndiyo vimbiso yakanakisa kupinda dzose.
Nguva yekutambudzika kukuru ichashandiswa naMosesi naEria kuti vaburitse maJuda 144 000 vakagamuchira Kristu saIshe neMuponesi wavo. MaJuda aya anobva agamuchira rubhapatidzo rweMweya Mutsvene.
Vachauraiwa vose nguva yeKutambudzika isati yapera.
Nguva yeKutambudzika yakaipa iyi ichavako kwemakore matatu nehafu.
Nyaya duku pakuti nei vanhu vazhinji vachitenda kuti mambo Herode vakafa muna 4 BC.
Saka izvi zvaizoreva kuti Jesu aizozvarwa muna 6 BC nekuti vazivi vakatevera nyeredzi kwemakore anoda kuita maviri. Havana kupinda muchidyiro asi vakapinda mumba. Havana kuona rusvava vakaona Mwana muduku. Josefa haana kutaurwa nezvake panguva yakasvika vazivi.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana mwana naMaria mai vake; vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura.
MaKristu anotarisa kuora kwemwedzi, kwakataurwa neaiita zvenhorondo wechiJuda Josephus, kwakaitika chinguvana Herode asati afa.
Josephus haana kupa gore kana mwedzi wakaora mwedzi uyu, saka akatisiya kuti tiite fungidziro pamhinduro yedu.
Kuora kwemwedzi kunoitika zvakanyanya kunyika dzekuMiddle East.
Kufungidzira kuti kuora kwemwedzi kupi kwacho haisi nheyo yakanaka yepekutangira kutsvaga chokwadi.
Herode aingove munhu muduku kwazvo munhorondo uye zviitiko muhupenyu hwake zvaive zvisina kugadzikika.
Hakuna kubvira kwapiwa zuva munhorondo rakafa Herode chairo.
Mambo weRoma ndiye iave munhu akakosha kwazvo munhorondo saka zviitiko muhupenyu hwake zvaive zvakanyorwa zvakanakisa.
MaKristu anofungidzira kuti kuora kwezuva uku kwakaitika muna 4 BC apo 36 % yemwedzi chete ndiyo yakati svibei, zvisina tsigiro yakasimba.
Mugore 1 BC kwakaitika kuora kwemwedzi kuviri, kumwe muna Ndira kumwe muna Zvita. Kuora kwekutanga kwaive kudzima kwemwedzi kwakazara zvikamu zana muzana kwakatora awa rimwe nemaminetsi 41.
Saka nei uku kusiri kuora kwemwedzi kwairehwa naJosephus? Vanotenda vegore 4 BC havana mhinduro pamubvunzo uyu, kunze kwaizvozvo hazvienderane nemazuva avanotaura.
Kana kuti kuora kwemwedzi pakupera kwa 1 BC apo 53% yemwedzi yakavharwa nerima?
Kana kuti kwaivewo hako kumwewo kuora kwemwedzi sezvo zvichigaroitika.
Asi izvi zvose hazvina maturo uye hazvina simba kuti tiwane zuva rakazvarwa Jesu pazviri kubva pakarenda redu.
Regai tigare pazuva rehushumiri hwaJohane mubhapatidzi kunaRuka. Izvi zvese zvinobva pazuva rimwechete, kufa kwamambo weRoma akararama kwenguva refu uye mambo wayo wekutanga, Augustus Kesari muna 14 AD. Hakuna anopikisa zuva iri.
Zuva rekufa kwaHerode muna 4BC rakapikiswa zvakanyanya nevadzidzi vakawanda vane dzidzo yakakura uye humbowo netsigiro zhinji panhaurirano dzavo. Saka zuva ra 4 BC harisisina hudzamu uye rinopikiswa. Saka nekudaro, riri kure pakuonekwa semhinduro yechokwadi.
Saka ngatisabatwei nezuva “rinofungidzirwa” kuti Herode akafa richitsigirwa nekuora kwemwedzi kusina kubvira kwanyatsotsanangurwa nemunhu wezvenhorondo Josephus.
Mumwe wezvenhorondo Suetonius akati mambo Carigura akauraiwa awa rechinomwe rezuva. Josephus akati raive awa rechipfumbamwe rezuva. Saka vanhu venhorondo vanotaura zvakasiyana neumwe neumwe wavo saka chokwadi chinofanira kutsvagwa kubva muMagwaro chete, kana zvichiita, kukunda kubva kunhorondo.
Josephus akati Herode akadaidza muprista kubva kuBabironi, zita rake ainzi Ananelus, akamupa huprista hukuru.
Josephus akabva azorwisa izvi papeji rinotevera achiti Ananelus aive “weboka rehuprista hukuru”.
Asi kuti Jesu akabhapatidzwa mugore 30 AD zvinobva muMagwaro sezvo aive ava nemakore anenge 30 paakabhapatidzwa.
Ngatibvumirei chinhu ichi “hafu yenguva”.
Nguva dzimwe nguva nehafu yenguva.
DANIERE 7:25 Uchataura mashoko okumhura wokumusoro soro, uchaparadza vatsvene, vuye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo; ivo vachaiswa mumavoko ake kusvikira nguva imwe, nedzimwe nguva nehafu yenguva.
ChiPope chakamuka kubva mumatongo ehushe hweRoma. Pope ndiye musoro wechiumbwa ichi nenzira imwe iyo Hitira aive mukuru webato reNazi.
Roma yechipegani payakarasikirwa nesimba rayo kumarudzi evatorwa, chiPope chakabva chasimuka kuva nesimba pakati pemarudzi evatorwa aya aive aparadza hushe hweRoma yechipegani yekumadokero. Chipope chakamukira Mwari pachakatora chinzvimbo chechiprista chikuru chekuBabironi Pontiff makore akapoteredza 440 AD vakaenderera mberi nekuita dzidziso dzakaita semamasi, pugatori, rozari, achibhishopu, kadinari nezvimwe zvakadaro zvose zvisina kunyorwa muBhaibheri.
Madzibaba ekereke yeRoman Catholic vakaita makore mazana maviri vachiumba dzidziso yaMwari weTiriniti (izwi risimo muBhaibheri) savatatu- mu- mumwe (hazvimo zvakare muMagwaro) vachishandisa zvinhu zvisimo muBhaibheri sa “Mwari Mwanakomana” Mwari Mweya Mutsvene” vasingatsananguri kuti nei kutaura uku kwese kusimo muBhaibheri, asi kutaura kuti “Mwari Baba” kurimo muMagwaro.
Kutaura kuti “Mwari umwe muVanhu vatatu” hakumo muMagwaro.
Baba neMwanakomana “ndevekukosha” kumwechete (hazvimo zvakare muBhaibheri).
“Munhu wekutanga muhuMwari”, “Munhu weChipiri muhuMwari” uye “Munhu weChitatu muhuMwari” zvese hazvimo muMagwaro.
Murango mukuru wakauya nedzidziso yeTiriniti ndewekurasikirwa neZita raMwari. Vanhu vatatu vari mukuzara kwehuMwari. . Zita raBaba ndi Jehova. Zita reMwanakonama ndiJesu Kristu. Zita reMweya Mutsvene? Hakuna Zita riri kupiwa Mweya Mutsvene muBhaibheri. Saka tinosara nemaZita maviri eVanhu vatatu. Iyi haisi tsananguro inofadza zvachose.
Asi hatina Zita rimwe reVanhu vatatu ava vose.
Saka tinosara tisina zita raMwari wemaKristu.
Saka tinoshandisa njere dzedu dzakapusa totaura kuti mazita ezvinzvimbo zvitatu iZita.
Tinoti “Muzita raBaba, reMwanakonama neroMweya Mutsvene” sekuti iZita.
Asi kana tikabvunzwa kuti “Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekutii?”, tinoshaiwa mhinduro.
St Augustine wekuHippo, makore akapoteredza 4 00 AD akati zvaive zvakanaka kurwadzisa vapikisi mune zvechitendero. “Kurwadzisa” kana kuranga uku nekukasika kwakatanga kutsanangurwa kuchinzi “kurwadzisa nekuuraya”.
Vanhu 68 miriyoni vaisatenderana nekereke yeCatholic vakauraiwa zvinorwadza muNguva yeRima, uye kuuraya kwakaipa uku kwakazoguma apo John Wesley akatanga kuparidzira ruponeso makore akapoteredza 1700 kuparidza uku kwakakura kuva hutsvene uye nguva inoshamisa yemamishinari yeFiradefia (rudo kuhama munashe).
Mudzvanyiriri weRoma yechipegani Julius Kesari akaita shanduko huru pakarenda paakawedzera mazuva 90 muna 46 BC. Pope Gregory 13 akashandura karenda achibvisawo mazuva gumi muna 1582. Saka Roma, yechipegani nechiPope, yakashandura nguva dzekarenda kwatiri.
Damasus akaita Bhishopu weRoma muna 366 AD. Akaita Bhishopu wekutanga kumisa kushandiswa kweBhaibheri. Nekukasika wakava mutongo werufu kuwanikwa uine Bhaibheri.
Pope Leo I makore akapoteredza 440 AD akatora chinzvimbo chechipegani chaPope kana Pontiff semuprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Kubva apa Bhishopu weRoma akatanga kudaidzwa kuti “Pope”.
Chirairo chekupedzisira kana kuti Chidyo chaipembererwa semasi chingwa newaini zvichibva zvatonzi ndiwo muviri neropa raJesu zvechokwadi.
Pope akaitwa Bhishopu wepasi rese. Munhu wese munhu wake.
Akaisa miripo yekuti vanhu vaikwanisa kutenga kuti varegererwe zvivi.
Maprista nemasisita eRoman Catholic haatenderwi kuroora.
Pugatori yakaitwa nzvimbo yepakati yawaizonotambudzika mumashure mekufa. Kana vanhu vakakubhadharira mari, waizobva munzvimbo inonzi pugatori iyi nekukasika.
Muna 1302 kwakataurwa kuti munhu haazowani ruponeso kunze kwekunge azviwisira kunaPope weRoma.
Izvi zvingori zvishoma zvezvimwe zvitsva (zvisimo muMagwaro) zvakaunzwa nechiPope.
“Uye ivo (vatsvene) vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva.”
Nguva dzimwe nguva nehafu yenguva
Vhiki rekupedzisira remakore manomwe muyero wenguva.
Nguva iyi yevhiki rekupedzisira inogurwa napakati uye mahafu maviri aya akaparadzaniswa kuitira kuti makore 2 000 enhorondo yekereke (nguva nomwe dzemakereke) dzikwane pakati penguva mbiri dzakapatsanurwa idzi.
Mukana “wenguva dzemakereke” unodaidzwa kuti “hafu yenguva” sezvo dzichiparadzanisa nguva muzvikamu zviviri zvemakore matatu nehafu.
DANIERI 7:25 Uchataura mashoko okumhura wokumusoro soro, uchaparadza vatsvene, vuye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo; ivo vachaiswa mumavoko ake kusvikira nguva imwe, nedzimwe nguva nehafu yenguva.
Antikristu achatonga mumakereke KUSVIKIRA hafu yenguva yapera, kusvikira nguva dzemakereke dzapera nekukwira kweMwenga kudenga, kereke yechokwadi. Kozouya makore matatu nehafu ekupedzisira.
Nguva yeKutambudzika kukuru ichaitika maporofita maviri, Mosesi naEria, ndivo vachaenda neEvangeri kumaJuda.
Vhiki rechimakumi manomwe raDanieri rinopatsanurwa kuita mahafu maviri. Jesu akaita hushumiri hwemakore matatu nehafu maJuda akamuramba seShoko rinorarama.
Mwari akabva atanga kushanda nemaHedeni makore 2 000 enhorondo yekereke akapatsanurwa kuita nguva nomwe dzemakereke.
Kuita kwaantikristu kwechiPope kuchatanga kurwadzisa kereke yechokwadi yova nehushamwari naye kuitira kuti chichechi chechi chemasangano (kunotonga pfungwa netsika dzevanhu) chinobva chatambirwa nevanorwisa nhema avo vanobva vazonyengedzwa vachipinda mukutenda muzvinhu zvisimo muBhaibheri. Vatendi vechokwadi vanobva vatarisana nekutadza kunouya zvakachenjera nevanhu vazhinjivanenge vachivapikisa. Izvi zvichaitika kusvikira kereke yechokwadi yabva panyika pakunotanga kwenguva yeKutambudzika kukuru.
Mwari akasarudza kutora kereke kubva pamarudzi avahedeni mukati menguva nomwe dzemakereke dzakatanga kuBhuku raMabasa. Nguva yekereke yekupedzisira (Raodikia , zvichireva kuti “kodzero dzevanhu”) ichapera apo Jesu anobva pachigaro chenyasha (imwe nguva inouya nekukasika) achiuya panyika kuzotora kereke yake kana kuti Mukadzi wake. Ipapo ruponeso runenge rwaguma sezvo kunenge kusisina ropa pachigaro chenyasha. Saka hakuna maHedeni anokwanisa kuwana ruponeso munguva yeKutambudzika. Ruzhinji ruchabuda munguva yeKutambudzika ndivo maKristu vasikana vakarara vakaponeswa kare nguva yekutambudzika isati yatanga, asi vakapesana nekukwira kudenga kwekereke.
ZVAKAZARURWA 7:9 Shure kwaizvozvo ndakatarira, ndikavona vazhinji-zhinji vasingagoni kuverengwa nomunhu, vakabva kundudzi dzose, namarudzi, navanhu, nendimi, vari pamberi pechigaro chovushe, napamberi peGwaiana, vakapfeka nguvo chena, vakabata michindwe mumavoko avo.
ZVAKAZARURWA 7:13 Ipapo mumwe wavakuru wakapindura, akati kwandiri: Ava vakapfeka nguvo chena ndivananiko? Vakabvepiko?
14 Ndikati kwaari: Ishe wangu, imi munoziva. Akati kwandiri: ndivo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguvo dzavo vakadzichenesa muropa reGwaiana.
Pakupera kwenguva yekereke yekupedzisira, nguva yeRaodikia, Jesu akamira pamukova kunze kwekereke sezvo maKristu akazadzwa nekurwira kodzero dzavo uye zvido zvavo zvekuti havade chinhu, chero kugadziriswa.
Mambo akarambwa anodzokera kumaJuda kunozadzisa makore matatu nehafu avakavimbiswa. MaJuda achazunzwa kwazvo munguva yeKutambudzika zvekuti vachazvipira kumuteerera pane kumuramba.
Asi Mwari achiri kukwereta maJuda hafu yevhiki makore matatu nehafu. Saka Mwari anoshanda neIsraeri mumakore matatu nehafu enguva yeKutambudzika.
MaJuda mazhinji anotenda achafa munguva yeKutambudzika kukuru asi pakupedzisira kuchava nemaJuda 144 000 vachasangana naMessia wavo.
ZVAKAZARURWA 7:4 Ndikanzwa kuwanda kwavakaiswa chisimbiso; vane zvuru zvinezana namakumi mana nezvina, vakaiswa chisimbiso vachibva kumarudzi ose avana vaIsraeri.
Zvino maJuda 144 000 vachauraiwawo numuchinda waantikristu.
ZVAKAZARURWA 6:11 Ipapo umwe neumwe wavo akapiwa nguvo chena, vakavudzwa kuti vambozorora chinguva chiduku, kusvikira vamwe varanda pamwechete navo nehama dzavo, dzaifanira kuurawa saivo,varinganiswa vose.
Kristu anobva adzoka kuAmagedoni.
Larkin akaita kumwe kukanganisa pakufunga kuti maHedeni achawana ruponeso munguva yeKutambudzika kukuru.
Avo vachapunyuka munguva yeKutambudzika kukuru ndivo maKristu vasikana vakarara vakaponeswa nguva yeKutambudzika kukuru isati yatanga. Nguva yeKutambudzika iriko pakugadzirisa maKristu akanaka asi vakanyengerwa kuti vabve pakutenda zvisiri muBhaibheri sekuti:
Mwari iTriniti uye rubhapatidzo rwemvura mumazita ezvinzvimbo zvaBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene.
Kusaziva kwekereke kuti chivi chekutanga chaive chii uye kuti nei Mwari akati anoda ropa remhuka kuripira zvivi zvedu pakutanga.
Kutonga kereke nekusimudzira hutungamiriri hwevanhu. Kuzadzwa kwakaitwa makereke nechinzvimbo “chaMufundisi” tichiona kuti izwi rekuti “Pasita” rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva. Saka mufundisi kana pasita haana simba rinobva muMagwaro kuti atonge kereke.
Mhemberero dzechipegani dzeKisimusi dzekupemberera mwari wavo wezuva musi wa 25 Zvita nemuti wavo “weKisimusi” wakashandurwa nekereke yeRoman Catholic kuti rive zuva rekuzvarwa kweMwanakomana waMwari makore akapoteredza 350 AD. MaCatholic anotenda mumhemberero dzinodaidzwa kuti mamasi. Saka mhemberero dzamwari wezuva idzi dzakashandurwa kuita masi yaKristu kana kuti Kisimusi.
MaKristu ari kuramba muprofita wenguva yekupedzisira ariko kudzidzisa kuti tingaturikira sei Magwaro kuti tive nekutenda kumwechete nekereke yekutanga. Makereke, nekuzadzwa kwavo nekuda kuwana kutadza muHama Branham (aitove nekutadza kwake sezvo aive munhu wenyama) vakamuramba vakarasikirwa nezvakanaka zvaakaita uye kutambanudza kwaakaita zvakavanzika zvemuBhaibheri. Pasina dzidziso dzehama Branham tingadai tisina kubvira tanzwisisa zvimwe zvinhu zvakakosha muBhaibheri zvakaita sekuti:
Jesu akanyora kaviri muguruva pavakamubvunza pamusoro pemukadzi aive atorwa muhupombwe. Nei?
Umashure mekumuka kwake Jesu akaudza Maria kuti asamubate (kuna Mateo) asi kuna Johane akamutendera kubata tsoka dzake. Nei paine musiyano uyu?
Kuna Mateo naMarko vakaona mutumwa mumwechete pabwiro risina munhu. Kuna Ruka naJohane vakaona vatumwa vaviri. Nei Mateo naMarko vasina kutaura pamusoro pemutumwa wechipiri?
Nei Pergamum yakapiwa kupedziswa kwechiGiriki Pegamos? Mamwe makereke matanhatu kuna Zvakazarurwa haana kupedziswa kwechiGiriki.
Zvii zvishamiso zvakaitwa nechikara chekuna zvakazarurwa 13?
Moto wakauyiswa nechikara kubva kudenga ndewei?
Chiverengo chechikara 666 chimbori chii? Ndicho chiverengo chemunhu (munhu mumwechete). Kana mukatsvaga paintaneti munoona kuti hakuna Pope akazvidaidza kuti Vicarivs Filii Dei (Vicar yeMwanakomana waMwari). Hakuna chero akatsiva Pope akatora zita iri, asi kunyangwe dai vakazviita vaizova vanhu vakawanda. Chiratidzo chinomiririra munhu mumwechete. Ndiyani? Ndiyani munhu mumwechete ari kukwanisa kupa kurudziro munhorondo kwenguva refu achikonzeresa kuti vanhu vakundikane kuenda kudenga, kusanganisira vazhinji pamazuva edu nemunguva inouya.
Hongu, tinoda muprofita wenguva yekupedzisira kuti atwasanudze mafungiro edu kuti kana tikatanga kuverenga Bhaibheri tirinzwisise.
SemaKristu, kana takavimbika uye tisingazvinyengeri, tichaona kuti tiri kutambudzwa nekushaiwa ruzivo rwezviri kuuya munguva inouya. Hapana kereke yakafanoona kudonhera pasi kwekomunisimu pakadonha masvingo eBerlin (zvakabva pakukanganisa kwaive kwaitwa nemumwe aishandapo wekuGerman yekumabvazuva) kana kurwiswa kwakaitwa paTwin Tower, kana kudonha munezvemari muna 2008 - 2009, kana kusimuka kweISIS kuIraq nekuSyria. Saka tiri kungotsvairwa zviri nyore neduti remhepo yezviitiko izvi zvinouya tisingafungiri.
Takafungidzira Y2K pazuva rekutanga regore 2000 apo makomputa aizokonzeresa kusagadzikika nekutadza kugara mazuva ari zvaari pakarenda. Hapana chakaitika. Zvakangodarika zvakadaro. Saka takakanganwa Y2K nekukasika sezvo zvakatizivisa kusaziva kwedu kwakazara pane zvichaitika nguva inouya.
Saka tiri mapofu kana tasvika pakutarisa zvinhu zvenguva inouya nekuti hatizivi zvichaitika munguva inouya. Vanhu vazhinji vanoita sevanotsvaga kuzadzisa kusagutsikana kwavo kunoti darikei kusuwisa kunoita kutadza kuzadzisika kwetariro dzenguva inouya. Pakati pezviitiko zvisingazivikanwe izvi, mweya waantikristu unoramba wakavanda usingaonekwe pakati pedu.
Kukoshesa kwedu mazwi akataurwa nevanhu vanotitungamirira kunotitadzisa zvakazara kudzokera kudzidziso dzeTestamente Itsva.
“Zvakanyorwa zvichinzi” hakusisiri kutaura kukuru mukereke nekuti vanhu havachanzwisisa zvakawandisa pane zvakanyorwa muBhaibheri. Kana vakabvunzwa mubvunzo wakaoma pamusoro peBhaibheri, maKristu anobvisa dambudziko iri zviri nyore nekutaura kuti “Hazvina kukosha”.
Kusagona kwedu kuziva zviri muneramangwana kunofanira kutiita kuti tione kuti tariro yedu imwechete iri pakudzokera kuMagwaro, uye kuti tiite izvi tinoda kunzwisisa kwakakwana pane zvakanyorwa muBhaibheri.
Larkin aitendawo kuti Babironi richazovakwazve.
Baibheri rinoti harizovakwizve.
JEREMIA 50:23 Nyundo yenyika yose yagurwa-gurwa nokuvhuniwa sei! Babironi rava dongo sei pakati pamarudzi!
JEREMIA 51:29 Nyika inodedera nokurwadziwa; nokuti zvakafunga JEHOVA kuitira Babironi zvakasimba, kuti aite nyika yeBabironi dongo, isina unogaramo.
JEREMIA 51:37 Babironi richaitwa mirwi yemabwe, vugaro bwamakava, chinhu chinoshamisa, chinoridzirwa miridzo, pasina unogaramo.
JEREMIA 51:42 Gungwa rakakwira rasvika Babironi, rafukidzwa namafungu aro mazhinji.
43 Maguta aro ava matongo,nyika yakaoma nerenje, nenyika musingagare munhu, hakunomwanakomana womunhu unopfuvura napo.
Saddam Hussein akatanga kuvakazve Babironi asi Mwari akashandisa vekuAmerica muhondo mbiri dzeGarufu kumumisa. Mumashure mekufa kwaSaddam, vekuIraqis vakatangazve kuvaka Babironi. Ipapo ISIS yakabva yangosimuka ikatora chikamu chikuru kwazvo chenyika izvozvi Iraq iri kushandisa mari zhinji kwazvo kuti irwise vanhu ava. Parizvino hakuna mari iripo kuti ienderere mberi nekuvaka. Zvakare Mwari akapindira kuti chiporofita chekuti Babironi richava dongo chazadziswa.
Larkin haana kutaura kudzoka kwemaJuda mumusha mavo.
Larkin akafa muna 1924 uye panguva iyi zvaive zvichinzi hazvizogoneki kuti maJuda aizodzokera mumusha mavo. Saka hakuna akaona kukosha kwechiporofita ichi. Kwakabva kwauya horokasiti apo Hitira akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu muhondo yepasi rese yechipiri. Muna 1945 Starlin, mudzvanyiriri wekuRusia, akataura na Churchill pamusangano weYaita kuti aida kuti Israeri iite Nyika yakazvimiririra. (Aitarisira kuti maJuda aizodzikisira kurudziro yemaBritish muMiddle East.) Muna 1947 mubatanidzwa wenyika dzepasi rese wakaita sarudzo kuFlushing Meadow, kuNew York. Totenda kurutsigiro rwevanhu vanoita nezvevhu, United Nations yakakunda nezvikamu zviviri kubva muzvitatu pasarudzo zvaidiwa kuti maJuda apihwe nzvimbo muParesitina kuti vave Nyika yakazvimiririra Israeri. Israeri yakawana kuzvitonga muna 1948 ikabva yarwiswa nemarudzi mashanu echiArabu Zvisinei, Israeri yakakunda muhondo iyi. Imwe hondo muna 1956 yakateerwa nehondo yemazuva matanhatu yemuna 1967 yakazoita kuti Israeri ikure zvakapetwa kaviri. Vakaramba vakashingirira pavakarwiswa neEgipita muna 1973, nerubatsiro rwemutungamiri wenyika Nixon akavapa zvombo nendege dzemuchadenga, vakakwanisa kukunda zvakare . Parizvino Israeri yava nyika uye yakasimba kwazvo.
Zvisinei muvengi mukuru weIsraeri iSyria ine hondo yakasimbawo kwazvo. Hezibora, chikwata chemaganda chekuRebanoni chakavengawo Israeri kwazvo uye chine hondo yakasimba. Egipita ine mauto akasimbawo zvakare. Kana vatatu ava vakabatanidzwa vanokwanisa kupa Israeri nguva yakaoma kwazvo. Saka, kubatsira kuti Israeri irarame, hondo yekupandukirana kwemarudzi muSyria yakatanga kubva muna 2011 nazvino ichiri kuparadza nyika iyi. Kuti vakwanise kubatirana nekumukirana kwese muSyria, mutungamiri wenyika Assad akakumbira rubatsiro rweHezibora. Saka Hezibora yakabva yasungwa mukurwisa hondo dzekumukirana kwemarudzi muSyria saka yakasiyana neIsraeri. Egipita yakasangana nekushanduka kwezvinhu, maMosiremu, anovenga Israeri akatora hushe. Asi kwapera rinenge gore rimwechete mauto eEgipita akarwisa akadzinga maMosremu aya. Parizvino Egipita yakazadzwa nekumukirana pachavo munyika mavo saka nekudaro havagone kurwisa Israeri. Saka vaIsraeri vachiri kukwanisa kurarama zvisinei nekuwanda kwevavengi vakavapoteredza.
Mwari akatotanga kutendeukira kumaJuda. Saka mazuva edu isu maHedeni averengwa.
VAROMA 11:25 Nokuti hama dzangu, handidi kuti musazive chakavanzika ichi; kuti murenge kuva namanyawi; kuti kuwomeswa kwomoyo kwakavuya pamusoro pavamwe vavaIsraeri kusvikira kuzara kwavaHedeni kwapinda.
26 Naizvozvo rudzi rwose rwavaIsraeri ruchaponeswa; sezvazvakanyorwa zvichinzi: PaZioni pachabuda musununguri; uchabvisa kusada Mwari kunaJakobo:
Vadzidzi veBhaibheri vakaita saScofield naLarkin, vachinyora mabhuku avo pakati pa 1900 na 1920, vakatadza kuziva ramangwana reIsraeri zvachose nekuti panguva iyoyo zviitiko zvaiitika zvairatidza kuti hazvaigoneka kuti maJuda akunde kutora nyika yavo yechipikirwa. Kukanganisa kwaLarkin kwaive pakutarisa zviitiko pachinzvimbo chekutarisa vimbiso yaMwari kumaJuda.
Larkin haana kunzwisisa zvachose Zvakazarurwa Chitsauko 13 saka zvakadaro haana kufungidzira kuti America ichava nekutonga kunoshamisa sesimba guru repasi rese mukati menguva yekereke yeRaodikia yakatanga muna 1906 nerumutsiridzo rwePentecositi rwerubhapatidzo rweMweya Mutsvene uye zvipo zvemweya.
Larkin akarasikirwa nemuono werumutsiridzo rwePentecositi zvakare. Haana kutaura nezvarwo. Kuva asiri muPentecositi kwakaita kuti asaone chikamu chePentecositi pakudzoswa kweMwenga kudzidziso yekutanga yekereke yekutanga. Akarasikirwawo nechiitiko chehutsvene panguva yaWesley haana kufungira kuti Wesley akawedzera hutsvene uye kuparidzira parumutsiridzo rwaLuther rweruponeso.
Larkin akarasikirwawo nezaruriro yenyeredzi nomwe. Aive asingazivi kuti mutumwa aiedza kutaura kutii. Akabvumawo kuti ichokwadi kuti Luther akabata nekubata kukuru panguva yake.
Dhokotera Larkin aive mudzidzi mukuru weBhaibheri asi akapesana nechinhu chikuru pazvinhu izvi. Larkin akatidzidzisa zvinhu zvikuru muBhaibheri asi muono wake mumavhiki makumi manomwe aDanieri nemuBhuku raZvakazarurwa zvaive zvakati rasikei. Mwari aizotuma mumwe munhu munguva yedu kuzozivisa zvakavanzika zveMagwaro iwayo, kunyanya paanotaura pamusoro pezvakaporofitwa. Larkin ane zvimwe zvakakosha zvaakagona kutaura chokwadi pazviri, zvaive zvakanakisa, uye Hama Branham vakakwanisa kuvaka panheyo idzodzo. Uku ndiko kukura kunoita ruzivo muvanhu.
Ndinotenda kwazvo hushumiri hwehama William Branham akatidzidzisa kuti tinganzwisisa sei Magwaro kuti tivakire panheyo dzakagonekwa nevadzidzi veBhaibheri vekutanga, asizve kuti tigone kuonawo pavakarasika. Saka tinogona kubatanidza zaruriro dzechokwadi dzezvakavanzika dzesungano uye nguva yeKutambudzika kukuru (nedzimwe nyaya zhinji).
Hama Branham vanapo pavakakanganisawo, asi zvavakataura zvechokwadi zvaive zvakanakisa, zvinosimudzira kunzwisisa kwedu kwatinoita Magwaro kupinda muzvikamu zvepamusoro-soro sezvo achitipa Muono Mukuru pamusoro pezvinhu zvikuru muBhaibheri. Sezvinhu zvakaita sekuti chii chaive chivi chekutanga (chakavanzika chikuru chinochengetedzwa mumakereke pasi rese) kuti tinzwisise kuti nei Mwari akati anoda ropa remhuka kuripira zvivi mumunda weEdeni. Kugona kwake kwaakaita kufambisa nyaya yaanenge abata achitevera maBhuku ese muBhaibheri kwakanakisa paanotsanangura kuti nei kuine zvipenyu zvina nguva dzose zvakapoteredza chigaro chaMwari, Shumba, nemunhu nedhonza negondo. Nei zviri mumutsetse wakadaro?
Hama Branham vaive nemuonero wakadzama muzvinhu zveMagwaro. Mufananidzo wekukokwa kumuchato wakapiwa paine munhu mupfumi kuna Ruka asi paina mambo kuna Mateo. Nei painemusiyano uyu? Evangeri remaBhuku mana rakamira sevarindi veBhuku raMabasa (rinotsanangura Mwari ari pabasa mukereke yake yekutanga). Shumba ndiyo mambo wemhuka dzesango. Saka Mateo anotsanangura Jesu saMambo wemaJuda. Saka saMambo, Jesu anokoka vanhu kumuchato wake kudenga pakupera kwenguva dzemakereke. Marko anotsanangura Jesu semhuru kana dhonza duku. Mutakuru wemitoro akasimba. Jesu ndiye muranda wedu akanakisa, anotitakurira mitoro yedu. Zvino Ruka, chiremba, anomutsanangura ari Munhu akarurama. Ndiyani angaziva munhu kukunda chiremba? Saka ndeumwe munhu , Musununguri werudzi rwevanhu, akatakura kurwadziwa kwedu panyika parizvino arikutikoka kuchirairo chemuchato mukubwinya. Evangeri rega-rega rinotizivisa Kristu nerutive rwakasiyana pahupenyu hwake.
Sezvo Einstein akavhura maziso edu kuzvinhu zvakadzama zvmurairo wefizikisi, saka nenzira imwechete, Hama William Branham vakavhura maziso edu kumuono wakadzama kwazvo muShoko raMwari rakaziviswa.
Hongu Einstein akambokanganisa. Asi zvaakagonawo zvaive zvichidakadza. Einstein paaizivisa Sainzi, aigona kwazvo. Tinokwanisa kutaurawo zvimwechete nehama Branham kana tasvika pakuzivisa Bhaibheri.
Einstein aive nevapikisi vakawandisa. Kukanganisa kwake, kwechokwadi kana kwaifungidzirwa, kwakaziviswa zviri pachena zvisina tsitsi mumabhuku avo. Aive munhu wenyama saka, hazvirambiki, aive asingagone zvese. Asi akasarudzwawo kuva “munhu wesenturi iyoyo” muna 1999. Erementi 99 yakazodaidzwa kuti Einsteinium kurangarira zita rake. Zvisinei nekukanganisa kwake achiri kuonekwa nevazhinji semunhu aiziva kwazvo munezvesainzi dzesenturi yakadarika. Nei? Nekuti vakasarudza kumurangarira kubva pane zvaakanatsa pachinzvimbo chekutarisa kukanganisa kwake.
Vanhu vezvemweya vanokwanisa kudzidza pazviri kana vachiongorora hushumiri hweHama William Branham.